Ngaba amaNqaku oLuntu aKhuselwe phantsi kweNtetho yaSimahla kunye noShicilelo lwaSimahla? | Martech Zone
Ngaba amaNqaku oLuntu aKhuselwe phantsi kweNtetho yaSimahla kunye noShicilelo lwaSimahla?
NgoLwesihlanu, Septemba 13, 2013 NgoLwesihlanu, Septemba 13, 2013 Douglas Karr
Esi inokuba sesinye seziganeko ezoyikisayo ezisongela intetho yasimahla kunye nomatshini wokushicilela wasimahla kweli lizwe. Indlu yeeNgwevu ipasile umthetho wekhaka losasazo obo buchwephesha buchaziweyo kwaye kuphela kodidi olukhuselekileyo lwentatheli ngabo babandakanyekayo imisebenzi esemthethweni yokuqokelela iindaba.
Ukusuka kwimbono yeenyawo ezingama-10,000, umthetho osayilwayo ubonakala ngathi ngumbono omkhulu. Iphephandaba i-LA Times lide layibiza ngokuba “nguMthetho oYilwayo wokukhusela intatheli”. Ingxaki lulwimi olusisiseko oluvumela urhulumente ukuba achaze ukuba yintoni a intatheli ngubani, ngubani a intatheli yi, okanye yintoni ukuqokelela iindaba ngokusemthethweni na.
Nantsi into endiyithathayo. Ubuntatheli bobuntatheli busebenzisa uxinzelelo olungenakoyiswa kurhulumente wethu obhengeza itoni yemicimbi. Ewe kukho inkxaso enamacala amabini ekuchazeni ngokutsha kunye nokunciphisa umda wokuba ngubani okanye yintoni ubuntatheli. Nabani na ogrogrisa ukuveza iingxaki zikarhulumente unokulahlekelwa kukhuseleko lwabo kumaphephandaba phantsi koMgaqo-siseko wethu. Bonke abezopolitiko bangayithanda loo nto… oko kuthetha ukuba banokusebenzisa imikhosi yaseburhulumenteni ukugrogrisa kwaye yoyikise abo bangavumelani nabo.
Nokuba uyavuma na Edward Snowden okanye akunjalo, ulwazi alukhuphileyo lwazisa uluntu kwaye lwabangela ingqumbo yeenkqubo apho i-NSA yayihlola kuthi. Lo mthetho uyilwayo awuchaphazeli ukuba semthethweni kwento eyenziwe nguSnowden. Eyoyikisayo, inokuba nefuthe lokuba ingaba intatheli eyayisikhuphileyo yayisemthethweni na, nangona wayengummi waseMelika. Kwakukhululwa izinto ezihleliweyo ukuqokelela iindaba ngokusemthethweni?
Phakathi kowe-1972 nowe-1976, uBob Woodward noCarl Bernstein bavela njengezona ntatheli zimbini zidumileyo eMelika kwaye bachongwa ngonaphakade njengezintatheli ezaphula iWatergate, elona bali likhulu kwezopolitiko zaseMelika. Uninzi lolwazi ababelunikiwe lwenziwa ngokufumana ulwazi ngaphakathi kwi-White House. Ngaba oko ukuqokelela iindaba ngokusemthethweni?
Mhlawumbi iRiphabhlikhi esemandleni ingatsho ukuba i-MSNBC ayikho semthethweni. Mhlawumbi iiDemokhrasi ezisemandleni zingatsho ukuba iindaba zeFox News azikho semthethweni. Ungathini ukuba intatheli enye ibhengeza isiphoso esikhulu sikarhulumente Ngaphantsi kokuqokelelwa kweendaba ngokusemthethweni? Ngaba unokuphoswa entolongweni kunye nehlazo elingcwatyelwe? Ezi ziingxaki nje kwimithombo yeendaba zemveli. Kuya kusiba kubi xa ucinga nge-Intanethi kwaye nokuba ukubhala inqaku kwi-Wiki kukhuselwe (awunakuchazwa njengablogi okanye intatheli).
Kuthiwani xa uqala iphepha le-Facebook ukuphikisa okanye ukuxhasa isihloko. Uchitha itoni yexesha lokugcina ulwazi kwi-intanethi, usabelana ngalo kwiphepha lakho le-Facebook, ukhulisa abaphulaphuli kunye nokwakha uluntu. Ngaba uyintatheli? Ngaba iphepha lakho likaFacebook likhuselwe? Ngaba uqokelele ulwazi owabelane ngalo ngokufanelekileyo? Okanye… ungamangalelwa yinkcaso, uluntu luvale, kwaye lutshixiwe ngenxa yokuba awukhuselwanga phantsi kukarhulumente definition.
Ngemidiya yoluntu kunye newebhu yedijithali, phantse wonke umntu othabatha inxaxheba uqokelela kwaye abelane ngeendaba. Sonke kufuneka sikhuselwe.
Emuva xa kwakubhalwa uMgaqo-siseko, nawuphi na umntu oqhelekileyo kwisitalato owayenokuboleka okanye afumane umatshini wokushicilela intatheli. Ukuba ubuya umva kwaye uphinde uphonononge amanye amaphepha ephepha elinye awayeprintwe ngelo xesha, ayemanyumnyezi. Abapolitiki batyholwa ngobuxoki obupheleleyo ukuze babasasaze kuluntu ukuze bangcwabe iinjongo zabo zezopolitiko. Ukuba yintatheli kwakungafunisi sidanga… awuzange uphinde upele okanye usebenzise igrama efanelekileyo! Kwaye imibutho yeendaba ayizange ivele kude kube ngamashumi eminyaka kamva njengoko amaphephandaba aqala ukuthenga iisetyhula ezincinci. Oku kukhokelele kwimithombo yeendaba zosasazo esinayo namhlanje.
Iintatheli zokuqala zazingabemi bokufumana ilizwi. Kwakukho iqanda mthethweni ukuba bajolise kubani na, balufumana njani ulwazi, okanye balupapasha phi. Ukanti… iinkokheli zelizwe lethu… ezazisoloko zijolise kolu hlaselo… bakhetha ukukhusela amalungelo okuthetha ngokukhululekileyo kunye nobuntatheli. Bakhethe, ngenjongo, ukuba bangachazi ukuba yintoni i-media, zaziqokelelwa njani iindaba, okanye zenziwa ngubani.
Ndiyavuma ngokupheleleyo Matt Drudge kule nto, ngubani Ingxelo yeDrudge ngekhe ikhuselwe phantsi kwalo mthetho uyilwayo. Lo mthetho oyilwayo owoyikekayo onqamleza kwi-fascism, ukuba awuvuli mnyango kuwo.
tags: intetho yasimahlalolwaziukuqokelela iindaba ngokusemthethweniisenethi
Iimbono: Ilizwi leQonga labaThengi
UBislr: Intengiso ye-OS ekrelekrele
Sep 13, 2013 kwi-11: 23 AM
Doug -intloko nje, bendinengxaki yokusebenzisa ulwandiso lwam lwebuffer (belungafumani URL) kwaye andikwazanga ukusebenzisa uGoogle+ kwibar yesabelo sakho kuba "yayiphantsi" iphepha kwaye andikwazanga ukuskrola. . Ukudangala ukuba funky.
Sep 14, 2013 kwi-11: 18 AM
Enkosi ngokwabelana.. Ndifunde kakhulu..